Subdomains, SEO iyo Natiijooyinka Ganacsiga | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 10, 2011 Khamiista, Sebtember 1, 2016 Douglas Karr
Waa kan mawduuc SEO ah oo aad u taabasho badan (oo aan toddobaadkan mar kale galay): Subdomains.
La taliyayaal badan oo SEO ah ayaa quudhsada subdomains. Waxay rabaan wax walba hal meel oo hagaagsan si ay si fudud ugu samayn karaan kor-u-qaadista goobta oo ay xoogga saaraan sidii ay u heli lahaayeen maamulkaas awood dheeraad ah. Haddii goobtaada ay leedahay domains kala duwan, waxay tartaa shaqada ay qaadanayso. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad khamaarayso… waxay rabaan inaad ku khamaarto hal gacan. Waa tan dhibaatada…
Dhab ahaantii, qaar ka mid ah guryaha ka soo kabsaday magaca caanka ah ee Google Cusbooneysiinta Panda waxaa loo rogay subdomains Mid ka mid ah barahaas ayaa ahaa Hubpages. Isticmaalidda Xeebaha, waxaan falanqeynay tirada ereyada muhiimka ah ee Hubpages ay ku qiimeynayeen ka hor iyo ka dib markii Panda ku dhufatay iyo u guuritaankoodii xigay ee subdomains.
Haddii aad meel iska dhigto dhammaan ereyada muhiimka ah ee calaamadeysan, qiimeynta sare ee Hubpages hadda dhammaantood waxay ku jiraan weydiimaha ku saleysan ereyga muhiimka ah! Waa kuwan doodo ku saabsan:
Google waxay leedahay "U oggolow TRILLION Subdomains Bloom"
Panda Fix ee Hubpages
Subdomains: Hubpages Way Ka Baxayaan Panda Purgatory Google?
Miyaad ku dhacday inaad aragto qof ku jira qodobbadaas oo ka hadlaya sicir-bararka or natiijooyinka ganacsiga? Haa… aniga sidoo kale
Kaliya maahan wax ku saabsan beeraha waxyaabaha ku jira iyo Panda. Subdomains -ka ayaa u oggolaanaya kala -goynta wax -ku -oolka ah ee goobtaada, oo bixisa caddeyn oo xoogga saarta waxa ku jira. Markaad jeexdo oo aad ku dhajiso goobtaada ilaa subdomains, adiga doono waxay u badan tahay inaad ku garaacdid darajada markaad u guureyso waxyaabaha aadna u baahan tahay inaad dib u rogto taraafikada. Laakiin mustaqbalka fog, waxaad u badan tahay inaad helo darajo fiican ereyada muhiimka ah ee ku habboon, wad taraafikada badan fudud iyada oo loo marayo boggaaga, oo waxaad siisaa waayo-aragnimo isticmaale oo bartilmaameed badan ah oo u kala qaybisa akhristayaashaada si wax ku ool ah isla markaana u hagaajisa heerarka guud ee beddelashada.
Subdomains uma xuma SEO, waxay u noqon karaan kuwo cajiib ah… haddii aad aaminsan tahay in SEO ku saabsan tahay helitaanka natiijooyinka ganacsiga. Laakiin marka la hirgeliyo subdomains, la -taliyayaasha SEO waxay og yihiin inay ku laadlaacayaan dariiqa wadada. Markaa… ma waxay gaadhayaan go'aan si dhakhso ah natiijooyin u hela ama natiijo ka fiican? Haddii ay rabaan inay mushaharkooda sii wataan, waxay u badan tahay inay qaadan doonaan waddada fudud.
Bartilmaameedku waa istaraatijiyad suuq -gayn oo wax -ku -ool ah oo aan laga faa'iidaysan warshadaha oo dhan. Waxaan aragnaa dabaysha isbeddelka, in kastoo. Google waxay ogtahay in waxyaabaha aadka u khuseeya, ee la beegsanayo ay fure u yihiin istiraatiijiyad weyn… waa waxa mashiinkooda wax lagu dhisay. Isbeddellada 600 ee algorithm ee dheeraadka ah ee ay sameeyaan sannad ayaa gacan ka geysanaya sii wadidda diiraddaas.
Marka maxaad wax u qaban lahayd taas fogaadaa beegsashada waxyaabaha iyo isdhexgalka isticmaalaha?
Tusaale kale waa duulaanka sawir qaadayaasha in ay leeyihiin gabi ahaanba waxba in la sameeyo ganacsiga dhabta ah. Ragga SEO waxay jecel yihiin infographic weyn maxaa yeelay waxay noqon doontaa fayras oo shirkaddu waxay heli doontaa tan badan oo gadaal -gadaal ah waxayna kordhin doonaan darajada iyo taraafikada.
Mise waxay ahayd…
Hadda waxaad haysataa tan badan oo taraafikada ah oo aan beddelin. Heerarka soo -boodka ayaa kor u kacay, is -beddelka ayaa hoos u dhacay…
Fikradayda, waxaad uun tahay dhaawacmay maamulka mashiinka raadintaada iyo wanaajintaada maxaa yeelay waxaad ku wareertay matoorada raadinta adoo u malaynaya in goobtaadu noqon karto wax aysan ahayn. Waxaan aad u jeclaan lahaa inaan soo dhaweyn diiran oo diirran u yeesho xog-ogaal u gaar ah warshadaha marka loo eego infographic fayras oo aan khusayn. Sababta maxaa yeelay waxay diiradda saaraysaa awooddayda iyo sumcadayda warshadayda. Goob la bartilmaameedsado ayaa had iyo jeer ka sarreyn doonta mid guud… oo xitaa ma geli doono saamaynta bulshada ee bulshada cidhiidhiga ah.
Haddii macmiilkaygu uu leeyahay mowduucyo kala duwan oo laga yaabo inaysan si toos ah ula xiriirin, waxaan aad uga jeclaan lahaa inaan kula taliyo inay u guuraan subdomains, garaacaan, oo dhisaan istiraatiijiyad aad diiradda u saareysa warshadaha, alaabada iyo adeegyada. Haddii waxa kaliya ee aad ka dambaysaa ay tahay darajo iyo taraafikada, subdomains -ka ayaa laga yaabaa inay yihiin pariah. Laakiin haddii aad raacdo natiijooyinka ganacsiga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad fiiriso labaad.
Kuweenna ku jira warshadaha ee ka shaqeeya helitaanka macaamiisha beddelaadda ayaa fahamsan doorka ay ciyaari karaan. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad siiso subdomains fursad kale.
Tags: ganacsinatiijooyinka ganacsigadomainSEOsubdomain seosubdomains
Tilmaamaha Dukaameysiga ee Xilliga Fasaxa